Tacaddiyada ka dhanka ah Warbaahinta oo cirka isku shareeray | KEYDMEDIA ONLINE
Tacaddiyada ka dhanka ah Warbaahinta oo cirka isku shareeray
Tacadiyada ka dhanka ah Saxaafadda ayaa cirka isku shareeray, tadobaadyadii la soo dhaafay waxaana xarig, jirdil iyo handadaadd loo geystay Wariyayaal kala jooga Muqdisho, Galmudug iyo Soomaaliland.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga Badbaadinta Suxufiyiinta ayaa qeylo dhaan ka muujiyey falalkii ugu dambeeyay ay sameeyeen ciidamada Dowladda iyo Muumullda, kuwaas oo Xarig iyo Jir-dil u geystay weriyeyaal isla markaana weerarey xarun warbaahineed oo gaar loo leeyahay, waxayna Dowlaadda Fadaraalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah, ugu baaqeen in la ilaaliyo xuquuqda Saxafiyiinta iyo guud ahaan Warbaahinta.
Toddobaadkii la soo dhaafey, Ciidamada Amniga waxay xireen, Cali Nour Cayn, oo ka mid ah howl-wadeennada bogga wararka Facebook-ga ee Mudug Journalist iyo Kanaalka wararka YouTube ee Galka TV, sidoo kale waxaa xabsiga muddo lagu hayay Bashiir Cali Shire, oo ah agaasime ku-xigeenka Idaacadda gaarka loo leeyahay ee Hubal.
Saraakiil ka tirsan NISA oo hubeysan ayaa qoryo amaanku ka furan yahay ku qabtay weriyeyaasha Universal TV ee kala ah Maxamed Ibraahim Bulbul iyo Khaalid Maki, iyagoo ku sugnaa goob mudaharaad ka socday oo ku taalla degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Saraakiisha ayaa la wareegay kaamirada wariyayaasha, waxayna amreen in la tirtiro muuqaalada ay duubayeen.
Booliska Galmudug ee Cadaado ayaa xiray weriye Haashim Cumar Xasan oo ka tirsan idaacadda Cadaado ka dib markii uu soo wariyay rasaas Boolisku ku furay ciyaar kubadda cagta ah oo u dhaxeysay kooxaha Cadaado iyo Baladweyne, taas oo sababtay geerida gool-haye da’yar ah. Weriyaha oo sidoo kale u warama Five TV, ayaa lagu hayey saldhigga degmada Cadaado 24 saac, iyada oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin, laakiin waxaa loo sheegay in uu ka waantoobo tebinta dhacdooyinka la xiriira Booliska.
Ciidamadu waxa ay weerareen idaacadda Mustaqbal oo iyana ka mid ah warbaahinta gaarka loo leeyahay, halkaas oo askartu ka qaateen qalabkii idaacadda qaarna ku burburiyeen, iyagoo jirdhil u geysteen Bashiir Maxamuud Yuusuf, oo ka mid ah wariyayaasha Mustaqbal.
“Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed (SJS) wuxuu cambaareynayaa xariga sharci darada ah iyo hanjabaadaha kale ee lagula kacayo suxufiyiinta ka howlgala Muqdisho, Galmudug iyo Somaliland, waxaana ku baaqeynaa in si deg deg ah xorriyadooda loo siiyo wariyeyaasha kala ah Aadan Cabdi Iidle iyo Maxamed Cumar Yuusuf oo lagu kala xiray magaalooyinka Hargeysa iyo Gaalkacayo”. Ayaa sidoo kale lagu yiri war ka soo baxay SJS.
Waxaa layaab noqotay markii la baahiyay wareysi aan dhameystirnayn oo laga qaaday sawir qaadihii Ciidamada Turkigu Tababaray, Sayid Cali Saaji, oo sheegaya in Ciidanka Haramcad ay doonayaa in ay qanimeystaan (Dhacaan ama boobaan) qalabka qaar ka mid ah warbahinta madaxa bannaan ee ka jirta Muqdisho.